Maimaimpoana ny Space Angry Bid amin'ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Ny saga Angry Birds rehefa mandeha ny fotoana dia lasa iray amin'ny malaza indrindra amin'ny App Store, saingy rehefa mandeha ny fotoana, Toa tsy nahavita nifanaraka tamin'ny filan'ny mpilalao i Rovio ary tsikelikely, noterena hampihena ny asany ny studio, satria ny lohateny farany dia tsy notohizan'ny fandraisana azy ireo, izay somary reraky ny lohahevitra mitovy amin'ny fiaviana sy endri-tsoratra hafa. Androany dia ampahafantarinay anao ny lalao Rovio fa azonay alaina maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra: Angry Birds Space, ao amin'ny dikan-teny ho an'ny iPhone izay manana vidiny mahazatra 0,99 euro sy Angry Birds Space HD, ao amin'ny kinova ho an'ny iPad izay manana vidin'ny 2,99 euro ao amin'ny App Store.
Ny kinova spatial an'ny Angry Birds Space dia manome ambaratonga mihoatra ny 300 miely amin'ny planeta 10 samihafa. Ao amin'ny Angry Birds Space dia afaka milalao amin'ny tadin'ny Cold Cuts isika, amin'ny planeta vita amin'ny fika maloto na amin'ny fipoahan'ny volkano, ankoatran'ny mankafy ilay fizarana vaovao Brass Gorrinos. Amin'ity lalao ity, ny hery misinton'ny planeta tsirairay dia manana andraikitra lehibe, izay tsy maintsy hizahantsika toetra hahafahantsika mamaha ireo dingana samihafa izay atrehantsika.
Ao amin'ity kinalan'ny Angry Birds ity dia hahita toetra vaovao isika, hery vaovao, fandefasana manokana arak'izao planeta izao, zava-miafina tsy misy hery misintona, ambaratonga fanampiny miafina, ary koa fiaviana mahavariana miaraka amin'ny antsipiriany lehibe, fiaviana izay hankafy kokoa ao iPad kinova, HD. Na eo aza ny lalao izay aloa matetika ao amin'ny App Store, Angry Birds Space dia manolotra antsika fividianana fampiharana, fividianana mamela antsika manampy vorona vaovao, mitsambikina ambaratonga ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Maimaimpoana ny Space Angry Favorites mandritra ny fotoana voafetra
Apple sy Amazon dia mamarana ny fifanarahana manokana amin'ny boky audio